Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Singapore » Singapore handray ny lanonam-panokafana mari-pankasitrahana 50 Bar tsara indrindra any Azia
Bars 50 tsara indrindra any Azia no nifidy an'i Singapore hampiantrano ny lanonam-panokafana azy voalohany, izay hanambarana ny fanontana fahatelo isan-taona ny lisitra. Natao tao amin'ny Theatre Capitol ny harivan'ny faha-3 Mey 2018, ny hetsika dia hatrehan'ireo bartender ambony any Azia, tompona fisotroana mihaja, olo-malaza amin'ny indostria ary haino aman-jery iraisam-pirenena; arahin'ny fety aorian'ny.
Singapore no trano iray amin'ireo seho fisotroana mampientanentana indrindra eran'izao tontolo izao, izay nitarika mari-pankasitrahana tamin'ny taon-dasa, niaraka tamin'ny bar 13 teo amin'ny lisitra, anisan'izany ny isa No.1, Manhattan Bar. Safidy voajanahary ny tanàna hampiantrano ny lanonana, satria izy io koa dia ho fonenan'ny Singapore Cocktail Festival amin'ny 4 ka hatramin'ny 13 Mey - izay ho fanitarana ny fankalazana ireo toeram-pisotroana fisotro tohanana tsara indrindra ao amin'ny faritra sy kolontsaina cocktail velona.
Ny lanonana mari-pankasitrahana sy aorian'ny fety dia harahan'ny fanontana # 50BestTalks amin'ny faha-4 may 2018. Ity farany dia forum iray tsy misy fanasana, izay hamorona ampahany amin'ny kalandrie Singapore Cocktail Festival, mampivondrona ireo talenta indostrialy, tompona bara ary ny haino aman-jery amin'ny alàlan'ny fifanakalozana mandrisika amin'ireo lohahevitra sy fironana bartending farany.
Ahoana ny fomba nanangonana ny lisitra Bar 50 Best Bar
Ity lisitra ity dia noforonina avy tamin'ny vato azon'ny Akademia 50 Bars tsara indrindra any Azia, vondrona manan-kery manana mpitarika indostrialy mihoatra ny 200 manerana ny sehatry ny bar an'ny Azia. Ny mpikambana dia mitanisa safidy fito isaky ny filaharam-pitiavana, mifototra amin'ny zavatra niainany bara faran'izay tsara tao anatin'izay 18 volana lasa izay - vato farafahakeliny telo dia tsy maintsy aleha amin'ireo bara any ivelan'ny firenena onenany.